Imfuyo esizweni sikaPhunga noMageba – iAfrika
Indoda engafuyile kwaZulu yayingahloniphekile neze ngoba amandla endoda ayebonakala ngemfuyo yayo. Lokhu akusho ukuthi labo abangenayo hlobo imfuyo bona babengenazwi emphakathini, babenalo izwi kodwa isisindo salo sisincane kunesalabo abafuye kakhulu.
Ngokujwayelekile phakathi kwemfuyo etholakala ngobuningi ezweni likaPhunga noMageba kubalwa izinkomo, izimbuzi, izinkukhu kanye nazo ke izincanga, bese kuthi kwezinye izindawo kufuywe izingulube noma-ke zona zingajweyelekile kangako. Inkulu indaba yemfuyo kubantu, ngisho ngesikhathi sezimpi emandulo uma benqoba izimpi babethatha izinkomo zalabo abehluliwe, kanti kwesinye isikhathi izimpi zaziqala ngakho ukuthi kwebiwe izinkomo, njengoba nje kwenzeka empini kaDingane noMzilikazi wakwaKhumalo. Kwathi inkosi uShaka isaphila uMzilikazi wabaleka nezinkomo zayo, kwathi ngemuva kokukhothama kwayo inkosi kwabheduka impi lapho uDingane elanda imfuyo.
Imfuyo yayisetshenziswa futhi nanamuhla isasetshenziswa ezintweni eziningi osikweni lwabantu abangamaZulu, ikakhulukazi endaweni yakwaZulu-Natal. Izibonelo ezilandelayo ezikhombisa lokhukubaluleka yilezo zezinkukhu, izimbuzi, kanye nezinkomo.
Izinkukhu azigcini ngokuhlatshwa zidliwe kuphela, ziyasetshenziswa nasemisebenzini ethinta abadala (amadlozi). Uma kwenziwa itiye labadala ekhaya, uma lowo owenza umsebenzi engenawo kahle amandla okuba nembuzi noma inkomo, uyaye asebenzise izinkukhu mhlawumbe ezimbili noma ezintathu. Uma kwenziwa umcimbi wabadala kuyaye kugaywe utshwala futhi kushiswe nempepho okuyiyona exhumanisa abangasekho emhlabeni kanye nalabo abasaphilayo. Izinkukhu ziyasetshenziswa futhi lapho umuntu ekhishwa isinyama, lapho-ke kusetshenziswa ngokukhethekile inkukhu emnyama. Umehluko uma kusetshenziswa izinkukhu wukuthi inyama yalezo ezihlatshelwa imisebenzi yamadlozi yona iyadliwa kodwa eyalezo zinkukhu ezisetshenziselwa ukukhipha isinyama yona iyalahlwa, ayidliwa.
Izimbuzi zingabukeka kuyizilwane ezincane kodwa kwesinye isikhathi ukubaluleka kwazo kwedlula ngisho izinkomo uqobo. Ngale kokufuywa kanye nokudayiswa kwazo, kuningi izimbuzi ezisetshenziselwa khona. Ngokuvamile lapho kwenziwa imisebenzi yesintu kuyaye kuhlatshwe izimbuzi. Izimbuzi yizona zilwane okuthethwa ngazo amadlozi ngoba kungafani nezimvu ezingakhali, izimbuzi zona ziyakhala lapho zihlatshwa, okwenza kwazeke ukuthi amadlozi ayawamukela yini lowomsebenzi obikwayo noma awawamukeli. Uma imbuzi ihlatshwa kodwa ize ife ithule lokho kusuke kubika inkinga ngalowomsebenzi owenziwayo. Umsebenzi wesintu uyaye uqale ngokushiswa kwempepho okuyikhona okubikwa ngakho umsebenzi ozokwenziwa, bese-ke kulandela ukuhlatshwa kwembuzi noma izimbuzi. Isikhumba sembuzi sisetshenziswa ngezindlela eziningi, senekwa elangeni size some bese sisikwa kahle sisetshenziswe ukuhlala phezu kwaso endlini, futhi kusetshenziswa sona ukusikela izingane iziphandla eziyaye zikhombise ukuthi bekubuswa kulowomuzi. Kuphinde kusetshenziswe zona futhi izimbuzi lapho kugezwa umuzi, njengalapho nje intombazane seyoniwe bese isoka layo likhipha izimbuzi eziyinani elithile uma lingenawo amandla okukhipha inkomo. Lezozimbuzi zesidikli azingeni ekhaya, zihlatshwa ngaphandle komuzi futhi zidlelwe khona lapho ngamantombazane esigodi. Izimbuzi ziyasetshenziswa futhi lapho kubikwa ingane ezelwe ekhaya.
Njengoba sishilo sisavulela ukuthi imfuyo nokubaluleke kwayo angeke sakubala ngoba kukhulu njengebutho likaZulu liya eMakheni, izinkomo ziyinsika nesisekelo somuzi. Umnumzane onezinkomo usuke ecebe ephelele engashodi ngalutho ngoba phela izinkomo ziyikho konke, ziyizolo ,inamuhla nekusasa ngisho ingane encane ekhasayo iyakwazi ukubaluleka kwazo. Izinkomo lezi zisetshenziselwa izinto eziningi esingaqala nje ngokuthi bonke ubudlelwano bemindeni ehlukahlukene bakhiwa ngazo izinkomo. Singaqala nje ngokuthi uma kuganiselwana izinkomo yizona ezihamba phambili ngoba phela akulotsholwa ngamakati nezinkukhu kepha kuba izinkomo ezihamba phambili, noma ke sekwasetshenziswa imali esikhathini samhlanje kodwa nayo ikalwa ngesisindo nohlobo oluthile lwenkomo. Ukusetshenziswa kwezinkomo akugcini nje kuphela uma kuganiselwana, noma kukhotheme inkosi emandulo kwakusetshenziswa zona izinkomo, inkosi ibigoqwa ngaso isikhumba senkomo uma isibekwa endlini yayo yokugcina. Izinkomo futhi zisetshenziselwa imicimbi eminingi. Emandulo babengahamba ze ukuba imfuyo yayingekho, baphinde badle amatshe bengezingwenya. Izikhumba zezinkomo kwakwakhiwa ngazo izidwaba ezazigqokwa amakhosikazi, kanye namabheshu nezinene zabanumnzane, ngisho okokucathulela imbala okuyizimbadada bekwakhiwa ngazo izikhumba zezinkomo ezomisiwe.
Esizwe sikaPhunga noMageba imfuyo iyikho konke,nsila, ubukhona kanye nempilo yethu kuncike emfuyweni. Lapha ke besiveza ngezibonelo ezimbalwa ubudlelwano obukhona phakathi kwabantu nemvelo kanye nokubaluleka kwemfuyo.
Amadlozi Amagama Amakhambi Amalobolo Imicimbi Imicimbi yesintu Imishado Imithi Inhlonipho Izigodi Izilwane Izimbuzi Izindlu Izinkanyezi Izinkolelo zesintu Izinkomo Izinkukhu Izintelezi Izinyanga Izinyoni Shembe Ukudla Ukugeza Umsamo Umshado
2 thoughts on “Imfuyo esizweni sikaPhunga noMageba”
20/04/2021 at 15:06
Ukuphupha usesibayeni senkomo bekuyala mayelana nekhaya
23/04/2021 at 14:32
Cofa lapha ukuthola incazelo Amaphupho ngenkomo